"पारिजात (साहित्यकार)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"पारिजात (साहित्यकार)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
पारिजात (साहित्यकार) (सम्पादन गर्ने)
०६:२६, २९ सेप्टेम्बर २००९ जस्तै गरी पुनरावलोकन
२ bytes added , १२ वर्ष अघि
०६:२५, २९ सेप्टेम्बर २००९ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
202.79.40.135 (कुरा गर्ने)
०६:२६, २९ सेप्टेम्बर २००९ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सुप्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातको जन्म वि.सं. १९९४ वैशाख महिनामा लिंगिया चिया बगान, [[दार्जीलिङ]] मा भएको थियो । पिताको नाम डा. के. एस. वाइबा र माताको नाम अमृत मोक्तान थियो । उहाँ माता-पिताको तेस्रो सन्तान हुनुहुन्थ्यो । लामाहरूको उहाँको छेकुडोल्मा नाम राखिदिएका थिए । उहाँको
अर्को नाम विष्णुकुमारी वाइबा हो । तर साहित्यमा उहाँ पारिजात नामले चिनिनुभयो । सानैमा आमाको माया-ममताबाट बञ्चित पारिजात अध्ययनलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले वि.सं. २०११ सालमा काठमाडौँ आउनुभयो । विद्यालयस्तरको अध्ययन दार्जिलिङमा नै पूरा गर्नुभएकी पारिजातले पद्मकन्या कलेज (तत्कालीन
पाटना विश्वविद्यालय अन्तर्गतमा) भर्ना भई मानविकी तथा समाजशास्त्रमा स्नातक गर्नुभयो । २०१६ सालमा स्नातकोत्तर -अंग्रेजी विषमा) गर्न थालेपनि तीन वर्षसम्म शिक्षण पेशामा संलग्न भई मदन मेमोरियल हाइस्कूलमा पढाउनुभयो । स्नातकोत्तर तह पूरा गर्न सक्नु भएन । शरीर कुँजिने रोगका कारण शिक्षण
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/39951" बाट अनुप्रेषित